Ngwa ise kachasị elu maka foto Photo - LucidPix
Ngwa ise kachasị elu maka Foto Foto
In choro ụfọdụ ngwa iji nyere gị aka ịgbanwe ọdịdị foto gị? Anyị ewerela ngwa ngwa foto eserese 5 kacha elu nke foto nke 2020 dị ugbu a! Nọgide na-agụ iji hụ kpọmkwem otu ị ga - esi bulie foto gị elu ma bulie ya elu.
Boomerang site na Instagram
Culttọ òtù nzuzo, Boomerang site na Instagram bu n'obi mee ka “oge ubochi di egwu na ihe anaghi eche.” Ngwa ahụ na -emepụta “boomerang” site na ị see foto dị mkpụmkpụ wee kọọkọta ha niile iji mepụta otu video mekọtara ọnụ. Nwere ike ị nweta ya site na Storelọ Ahịa App (dị na ma gam akporo ma iPhone) ma ọ bụ ịnwere ike iji ya ozugbo na Instagram. Boomerang bụ ihe dị mfe ma dịkwa mfe iji mee ka foto gị dị iche iche mana ọtụtụ mmadụ na-ejikarị ya, yabụ ị nwere ike ịhọrọ maka otu ngwa nwere ihe pụrụ iche! Dịka enweghị atụmatụ ndị ọzọ agbakwunyere na ngwa mmelite ahụ, ọ dị mfe iji ma ghọta.
Jikere ka iwere nzọghari banye na 90 site na ngwa igwefoto a na-adịghị ahụkebe! ““HUJI Cam na-eme ka oge gị dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa dị ka mmetụta nke ihe nkiri analog na-echeta ihe ochie. ” Ngwa ahụ rụpụtara nsonaazụ a na ntinye dị iche iche na foto (mgbe ụfọdụ na-eme ya blur dị ka enwere ike ịhụ n'okpuru iji nye ya "agadi" mmetụta). Nwekwara ike ịgbanwe foto gị site na ịtinye akara ụbọchị na akara oge iji mee ka ọ bụrụ ezigbo eziokwu! Nwere ike ịse foto ma chekwaa ya na ngwa ahụ, na -eme ka ọ dị mfe iji. Gbalịa ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale nyocha nke foto gị ma gbanwee ya ka ọ bụrụ 'ihe ndị nwere ike' 'na-echere!
LucidPix bụ otu n’ime ngwa foto dị mma na-agbanwe ihe onyonyo n’ime 3D site na iji AI dị elu etolite n’ime ya. Can nwere ike ịhọrọ ịkwalite foto dị iche iche dịka ọmụmaatụ ihe osise nke nkịta gị, ihe osise na-adịghị mma, ma ọ bụ ọbụna selfie! N'agbanyeghị isiokwu ahụ, ịnwere ike ijide ma mepụta omimi ka ukwuu iji mee ka foto gị dị ndụ. Ngwa ahụ nwere ọtụtụ atụmatụ, gụnyere okpokolo agba na ihe nzacha iji nyere aka hazie ihe oyiyi gị! Jiri mmetụ nke bọtịnụ kekọrịta ihe okike gị na Facebook ma ọ bụ Instagram. Ngwa a pụrụ iche ga - ejide n'aka na ị ga - eme ka foto gị pụọ iche!
Maka ntuziaka maka usoro esi eji LucidPix, pịa Ebe a!
Ngwa a na-emepụta onyonyo wigglegram nke onye ọrụ ahụ nwere ike iji aka ya wee mee ya. FILM3D dị mma maka Instagram ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịnwale ihe ọhụrụ ma na-akpali akpali na-ewu ewu. Okwesiri iburu n'uche na ihe onyonyo a apughi na enyo ya site na LucidPix obula n’agbanyeghi na o n’eme ka atule 3D di nma. Mgbe imepe ngwa ahụ, a na-etinye ya ozugbo na ọnọdụ njide ma dị mfe iji otu mgbanye nke bọtịnụ!
Igwefoto + Legacy
Ngwa a zuru oke maka ndị chọrọ ịkwalite ma ọ bụ imeziwanye foto ha. Igwefoto + Legacy na-enye ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na ndị dị ka Digital Zoom, Horizon Level, Clarity wdg. Ndị a na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyere gị aka ịmepụta foto kacha mma! Ngwa ahụ nwere ihe ụfọdụ gbagwojuru anya iji ya atụnyere ndị ọzọ n'agbanyeghị na oge nke abụọ ma ọ bụ nke atọ na-eji ngwa ahụ, ị ​​ga-enweta nkebi ya!
“Nkọcha ahụ bụ ihendori nzuzo nke foto foto nke iPhone-ọ na - agbakwunye ngwa ngwa igwe elektrik na nsoro ọ bụla.” - Kevin Sintumuang, The Wall Street Journal
Agree kwenyere na listi anyị? Mee ka anyị mara ma enwere ngwa ndị ọzọ dị ukwuu maka ịse foto nke ekwentị ị na-eji!
Na-achọ ụfọdụ foto nlele? Chọrọ ụfọdụ peeji Facebook iji soro? Lelee Kachasị mma n'ime foto 3D nke LucidPix na LucidPix 3D foto na Facebook! I nwekwara ike isi na Instagram anyị @LucidPix Iji hụ otu anyị siri mee ya!
Etu esi ede 3D XNUMXD foto →← Etu ị ga-esi were foto nri 3D dị ịtụnanya na LucidPix